Israa'iil oo "qaabileysa 100 ka mid ah caruurta agoonta Suuriya" - Worldnews.com
Israa'iil oo "qaabileysa 100 ka mid ah caruurta agoonta Suuriya"
Maamulka Israa'iil ayaa markii ugu horeysay ansixiyay qorshe lagu qaabilayo 100 ka mid ah caruurta agoonta ku noqotay colaadda dalka Suuriya.
Sida ay ku warramayaan warbaahinta Israa'iil, caruurta waxay helidoonaan sharciga deganaanshaha, afar sano ka dib.
Israa'iil waxay horey dagaal kula jirtay maamulka
Qaxooti Suuriyaan ah oo kaalinta koobaad ka galay iskuul Australia ku yaalla
Wiil qaxooti ah ah oo u dhashay dalka Suuriya oo labo sano ka hor aanan ku hadli kain luuqada Ingiriiska ayaa si wanaagsan uga baasay imtixaanka iskuulkiisa oo ku yaalla...
Isra'iil oo heegan ka gashay buuraha Golan Heights
Isra'iil oo heegan ka gashay buuraha Golan Heights kaddib "dhaqdhaqaaqa aan caadiga ahayn" ee ay Iiraan ka waddo Suuriya awgeed. Ciidamada Isra'iil ayaa digniin ka bixiyey...
BBC News 2018-05-08
Suuriya oo ku eedeeysay Israa'iil inay duqaysay agagaarka Dhimishiq
Warbaahinta dowladda Suuriya waxay sheegtay in Israa'iil ay duqaysay saldhigeeda ciidammada militariga ee koonfurta Magaalada caasimmadda ah ee Dimishiq. Wakaaladda wararka...
'Israa'iil oo gantaallo ku ridday' saldhig milatari oo Dimishiq u dhaw
Gantaal ay Israa'iil ridday ayaa qaraxwayn iyo holac ka kiciyay xarun milatari oo ka agdhaw garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha ee magaalada Dimishiq, sida ay sheegtay...
BBC News 2017-04-27
Australia oo soo celisay weerarradii ka dhanka ahaa "Dawladda Islaamka"
Dawladda Australia ayaa sheegtay in ay soo celinayso weerarradii dhanka cirka ahaa ee uu milaratigeedu ka fulin jiray gudaha Suuriya. Arbacadii ayaa lagu dhawaaqay in si ku...
Iiraan oo gantaallo ku garaacday fariisimo ay leedahay Israa'iil
Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in xoogagga Iiraan ay gantaallo ku soo garaaceen fadhiisimaha ay ku leeyihiin buuraha Golan Heights ee la haysto. Wuxuu sheegay in...
Iiraan oo gantaallo ku garaacday fariisimo ay leedahay Israa\_'iil
Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in xoogagga Iiraan ay gantaallo ku soo garaaceen fadhiisimaha ay ku leeyihiin buuraha Golan Heights ee la haysto. Wuxuu sheegay in ciidammada kacaanka ee Iiraan ay soo rideen ku dhawaad 20 gantaal, arrintaasina ay dhacday subaxnimadii hore ee Khamiista qaarkoodna la qabtay balse aysan wax khasaare nafeed ah ka dhalanin. Horraantii bishan ayay...
Israa’iil oo weerar khasaare dhaliyay ka fulisay Suuriya
Weerar ay Israa'iil ku qaaday saldhig milateri oo ku yaalla gudaha Suuriya una dhaw buuraha Golan Heights, ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen saddex dagaalyahan oo taabacsan xukuumadda Bashar al-Assad, ayadoo ay ku dhaawacmeen laba kale. Milateriga Israa'iil ayaa ka gaabsaday in uu ka hadlo...
Xalab oo si buuxda gacanta ugu gashay dowladda Suuriya
Ciidamada dalka Suuriya waxay shaaciyeen guul inay ka gaareen magaalada Xalab ee dalka Suuriya. Daad gureyntii ka socotay halkaas ayaa dhammaatay, dhammaan shacabka iyo mucaaradka ayaa laga saaray deegaanadii go'doonsanaa. Ruushka oo diidan qorshaha nabadda ee Xalab Duqeyntii ugu...
100 dumar: Waxbaridda dumarka ma xoojisaa tallaalka caruurta?
Taariikhda dumarka, awoodooda waxaa lala xiriirinayaa aqoontooda, taas oo la sheegay in ay faa'iido u tahay noloshooda iyo midda caruurtooda. Dalalka horumaray, cilmi baarid ayaa muujineysa xiriir adag oo ka dhexeeya cilmiga haweenka iyo ka hortagga cudurada la iska difaaci karo sida dabaysha, fuuq-baxa, xiiqdheerta ama kixda, jadeecada iyo tiibishada. Waxaa la sheegay in rubuc...
Ciidamada dowladda Suuriya oo la wareegay kala bar bariga Ghouta
Xoogaga daacadda u ah dowladda Suuriya ayaa la sheegay in ay la wareegeen kala bar bariga Ghouta . "Ciidamada dowladda waxa ay gacanta ku hayaan 50% Ghouta," waxaa sidaasi u sheegay wakaalada wararka AFP Rami Abdel Rahman, oo ah madaxa kooxda la socodka xuquuqda aadanaha Suuriya ee fadhigeedu yahay UK. Dhanka kale Kolanyo gargaar ah oo lagu waday in maanta ay u safraan goobaha...